Home » Business & Economics » ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ် – Joint Secretary UMFCCI Interview
ယူအက်စ်ဆန်ရှင်က.. အထည်ချုပ်မှာ.. တော်တော်သွားထိတယ်..။
ကျုပ်တို့မှာသာ မိုးမမှန်လို့ မီးမလာ ….ပူပါဘီ ဆယ်နေကဲ….
သာဂိ… နောင်နောင့် ကို ယက်ဆက်ဇမ်းးးးး
သူကြီး သတင်းစာထဲ သူ့ဓာတ်ပုံပါ တွေ့တယ်။ တော်တော်ချောတဲ့ အမျိုးသမီး လို့ဆိုရမယ်။
တကယ့်ကို ထက်မြက်ပြီး တော်တဲ့ အမျိုးသမီးပါ။
သစ္စာရှိရမယ် ရိုးသားရမယ် ကတိတည်ရမယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ကုမ္ပဏီမှာလို့ပြောသွားတဲ့ သင်္ကြန်ဆယ်ရယ်ပိတ်ပေးတာရယ်။ လစာပျှမ်းမျှတစ်သိန်းကျော်ရတာရယ်။ ခု အဲလိုမရတဲ့ အထည်ချုပ်အလုပ်သမားတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်။ သင်္ကြန်ဆယ်ရက်က ကျနော်တို့တောင် မပိတ်ဘူး။
သူ့အတွေးတွေ သဘောထားတွေ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေကို
ဒီလိုလူမျိုးမြန်မာပြည်မှာ များများရှိစေချင် ….
.အရီးဒုံဒုံ တို့ ဂိုဏ်းဝင် လို့ သဂျီးပြောလို့ မျှစ်မ အီကွေးရှင်း တစ်ခု ရသွားတယ်။
သူရို့ မမြင်လဲ မြ မြင် သွားလို့ ဝင်ပြီး ချွေးနွေးဗျစီ။ lol:-)))
အမှန်အတိုင်း ပြောတာမို့ မနာတော့ပါဘူး။
တခါက FM တစ်ခုမှာ ပြောသွားတာ။
အဲဒီလိုပြောတဲ့ ပညာရှိသာ အာဏာရရင် အပျိုကြီး လူပျိုကြီးတွေ တောထွက်ရမယ်လို့များ ဥပဒေ ထုတ်မလား မသိဘူး။
ခုတော့ မြင်သွားပြီ၊ဘယ်လိုလုပ်မလဲ မျှစ်။
.အား တီဒုံ အဲလောက်ကြီး လျှောက်မတွေးနဲ့လေ။ မျှစ် က ခပ်ပေါ့ပေါ့ ပြောတာပါ။ တကယ်တော့ ချမ်းသာတဲ့လူတွေကို မျှစ်အထင်ကြီးတယ်။ ဘာလို့ ချမ်းသာလဲဆိုတော့ တော်လို့ပါ။ သူတို့ဟာ ဘာလုပ်လုပ်ပေါ့နော်။ ဘာသာရေးပဲ လုပ်လုပ် ဘာပဲလုပ်လုပ် အရေးမကြီးဘူး။ သူ့အခွင့်အရေးပဲဟာ။ ဆင်းရဲတာလည်း အကြောင်းရှိတယ်။ ချမ်းသာတာလည်း အကြောင်းရှိတယ်။ ဘာသာရေးက ငယ်ဘ၀ကို သိပ်မလွှမ်းမိုးစေချင်တာတော့ အမှန်ပဲ။ ဘရိန်းအ၀ပ်ခံရတာ ဆိုးတယ်။ ဘာသာရေးစွက်ဖက်တဲ့ ပညာရေး မှာ တိုင်းပြည်နစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်မှ ပါရမီ ကိစ္စ တီဒုံနဲ့ဆွေးနွေးဦးမယ်။
အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကတော့ အမြဲရပ်တည်ပေးပါတယ်
အိုစီ (Over Confidence) နေမှာပေါ့အေ…
နာဆို ဘာမှ မတတ် တပြားမှ မရှိပဲတောင် အိုစီဖြစ်ချင်နေတာ..
ဘီလီယံဘစ်ဇနက်ကြီးမှာ.. ယူအက်စ်က..ဆန်ရှင်ဖွင့်လိုက်ရင်.. … ဘီလီယံထပ်ဆင့်နိုင်တာကို… ဆန်ရှင်ဖွင့်ပေးနိုင်ဖို့.. ကန်င်ပိန်းလုပ်ချင်လုပ်ဖို့..ငွေတပြားမှမသုံးချင်.. မသုံးကြတာကိုတော့.. အံ့သြမိတယ်..။